Ọnọdụ nke nwamba, afọ ole ka ha na-eto? | Nwamba Noti
Uto nke nwamba
Nwamba bu obere umu na ha na-eto incredibly ngwa ngwa. Naanị otu afọ ha na-eru ihe dịka gram 100 mgbe amụrụ ha ruo 2 ma ọ bụ 3kg ọnwa iri ka e mesịrị. Mana na mgbakwunye, a na-ahụta ha dị ka ndị toro eto site na ọnwa 6 ma ọ bụ 7, n'ihi na n'oge ahụ ha na-amalite inwe okpomọkụ na, yabụ, ọ bụrụ na mmekọahụ emee, pusi ga-amụ nwa nke ya. Naanị ọnwa isii, ee.
Ma uto nke nwamba anaghị akwụsị n'ime afọ mbụ, mana n'afọ nke abụọ na nke atọ ahụ ha ga-agbasawanye ntakịrị, ha ga-enwetakwa ibu ka mmepe ha na-eru n'isi njedebe ya. Mara ọkwa nke ọ bụla enyi gị ga-agabiga ma nwee obi ụtọ na nke ọ bụla n'ime ha na igwefoto dị n'aka ka oge na-aga ngwa ngwa, ozugbo ị ga-ahụ na bọọlụ ntutu gị abụrụla Maazị Cat.
1 Uzo nke ndu pusi
1.1 Onwa mbu
1.2 Ọnwa nke abụọ
1.3 N’agbata ọnwa nke atọ na nke isii
1.4 Site na ọnwa nke isii ruo n’afọ
1.5 Site na afọ mbụ ruo atọ
1.6 Site na afọ atọ ruo asaa
1.7 Site na asaa rue iri na abuo
1.8 Site na afọ iri na abụọ
2 Afọ ole ka nwamba na-eto?
3 Kedu mgbe ị malitere ịhụ na ịnụ nwamba?
4 Gini bu aru aru nwamba?
Uzo nke ndu pusi
N’okpuru ebe a, anyị kọwara ogo dị iche iche nke nwamba gị ga-enwe n’oge ndụ ya niile. Na nke ọ bụla anyị ga-akọwa mgbanwe ndị na-eme n’arụ ha na akparamagwa ka ị mara mgbe niile ka nwamba gị na-eto.
Amuru Kittens ìsì na ntị chiri. Ha dabere na nne iji lekọta ahụ ọkụ ha, na-eri nri ma na-adị ọcha, ebe ọ na-enyere ha aka belata onwe ha. N'oge a ha dị obere, ha amatala isi ísì nne ha ma bụrụ ndị isi na-eduzi iso ya, n'agbanyeghị na ọ gaghị abụ ruo izu nke atọ ka echiche a ga-ezu oke.
Banyere mgbe izu abụọ gachara, ha ga-emeghe anya ha, ha ga-amalite inyocha gburugburu ebe obibi ha, ma na-atụ egwu, ọ bụkwa na ruo ụbọchị iri na asaa ha agaghị enwe ike ịga ije nke ọma. Maka ugbu a, ha na-anọ nso nne na-agaghị ala azụ ịgbachitere ha megide onye ọ bụla dị mkpa. Ọ bụ ya mere n'oge a ọ ka mma na, ọ bụrụ na anyị na nkịta biri, anyị agaghị ahapụ ha naanị na nwamba.
Na izu atọ zụ ara pụrụ ịmalite, na-enye ha nri mkpọ (nke ka mma ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe okike). Ọzọkwa Ọ bụ ezigbo afọ maka ha ịmụ iji belata onwe ha na tray, ka ha nwere ike belata onwe ha. Nwere ike ịkụziri ha site n'iji nwayọ tinye ha na igbe ahịhịa mgbe nri ọ bụla gachara; n'ụzọ dị otú a, ị ga - ahụ n'oge na - adịghị anya ọ ga - aghọta na ọ bụ ebe a ka ọ ga - aga oge ọ bụla ọ chọrọ ya.
N’izu anọ ha bidoro igwu egwu n’egwuregwu ha, na-awụli elu n’elu nne ha, na-atarịta ibe ha arụ. N'oge a, ha na-amụta na ha aghaghị chịkwaa ike nke ezé gịka ha nwere ike imerụ ahụ mgbe ụfọdụ.
Ọnwa nke abụọ
Site na anya na ntị na-arụ ọrụ, inwe ike ijigide ọnọdụ ahụ, yana nnukwu ọchịchọ inyocha ihe niile, ọkwa dị oke mkpa na-amalite: ịkpakọrịta. Nke nta nke nta nne ha ga-akwụsị ị breastụ ara, yabụ ụmụ kittens ga-amụta ịnwe obere nnwere onwe. Yabụ na afọ a oge ga-eru mgbe anụmanụ ahụ ga-enwe mmekọrịta ya na mmadụ. Anyị ga-eji nwayọ were ha, ma nye ha mmetụ ume na ịkwa ụfụ ka ha wee sonyere anyị n'ihe dị mma (ọ masịrị m), ebe ọ bụ na a na-atụ anya na nwamba ndị a anaghị atụ ndị mmadụ ụjọ, kama ọ bụ ihe megidere ya.
Izu asatọ, enwere ike ikuchi ha. Mana ị kwesịrị ịma na ha na-arụsi ọrụ ike ma na-egwuri egwu, ihe nke ụlọ gị nwere ike ọ gaghị amasị ya nke ukwuu. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị nwere akpụcha aka ruru, nsogbu agaghị adị.
N’agbata ọnwa nke atọ na nke isii
N'oge a pusi "adịworị" nwamba. I nweela ihe niile ịchọrọ iji kwado maka ịbụ okenye. Ọ dịghị ya mkpa ka nne na-adị ndụ, na o yikarịrị ka ịmalite ịmalite ịga mba ọzọ, ihe anyị ga-ekwe gị naanị ma ọ bụrụ na anyị ejiri n'aka kpamkpam na ị gaghị anọ n'ihe egwu ọ bụla.
Mamụ nwanyị ga-abanye n'ime okpomọkụ na ọnwa isii. Ọ bụrụ na ịchọrọ naanị enyi, anụ ụlọ, ọ ga-abụ karịa ihe akwadoro kwupụta ma ọ bụ mee ka ha ghara (ma nwoke ma nwanyị) gburugburu oge a. Ọ bụ ezie na enwere ike ịme ya n’agbata ọnwa anọ na ọnwa isii, ihe kacha baa uru bụ ichere ruo ọnwa isii, iji zere nsogbu mmepe (ọkachasị n’ebe ụmụ nwoke nọ). Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị nye ya ikike ịga mkpagharị, nke a ga-egbochi nwamba gị ịbịa n'ụlọ na ọnya ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ bụ nwanyị, nwere ihe ijuanya (afọ ime).
Site na ọnwa nke isii ruo n’afọ
Ugbu a ee, i nweela nwamba toro eto. Ọ nwere ike ịdị ha ka ha hiri ụra karịa, mana ị kwesịrị ịmata na ha hụrụ egwuregwu n'anya, ọkachasị n'abalị. Ee, ha bụ anụmanụ ndị na - eme ehihie, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ụra gị n'abalị ị ga - achọ Jiri oge ị mụrụ anya n’ụbọchị soro ya gwuo egwu ma "mee ka ike gwụ ya." Na ahịa ị ga-ahụ ọtụtụ ụdị ihe eji egwuri egwu, dị ka ụdọ, akara ngosi laser, ụmụ anụmanụ jupụtara ... Họrọ ndị ị chere na ha ga-enwe mmasị na ya kachasị, ma soro enyi gị kachasị mma.
Site na afọ mbụ ruo atọ
N'ime oge a, nwamba ahụ ga-emecha mepee ya ma malite igosipụta omume ntorobịa. Ọ bụ na-emekarị na afọ ndị a mee ihe ichoro, inupụrụ ọbụna iwu ndị anyị na-enye ya. N'agbanyeghị oke ha, ha ka bụ ụmụ nkịta na-enwe mmasị igwu egwu ma dọta uche, ihe ha na-enweta mgbe niile, nri?
Site na afọ atọ ruo asaa
Nke nta nke nta anyị ga-achọpụta na nwamba anyị achọghị igwu egwu dị ka ọ dị na mbụ. Ọ na-etinye ọtụtụ oge na-ehi ụra (ihe dị ka elekere 14:XNUMX nke ehihie kwa ụbọchị), na omume ya ghọrọ ókèala ọ bụrụ na ọ dabara. N'ezie, site n'ọgbọ ndị a, ọ na-esiri ya ike (mana ọ gaghị ekwe omume) ịnabata nwamba ọhụrụ n'ókèala ya, nke, n'ụzọ, bụ ebe obibi gị.
Site na asaa rue iri na abuo
Site na afọ asaa pusi bidoro rue afọ. Ha na-anọkarị jụụ, jụụ. Enyi gị ga-anọ ọtụtụ oge zuru ike, ọ bụghị egwuri egwu. N'ezie, ọ ga na-eme ya oge ụfọdụ, ma ka ị na-eru nso ịka nka ị gakwaghị enwe ọchịchọ dị ukwuu site n'ịchụ ihe egwuregwu.
Site na afọ iri na abụọ
Pusi gi ochie. Ga-achọpụta etu agụụ ya si ebelata, na uche ya na-akawanye njọ. Enwere ike ịmepụta mgbanwe dermatological, mepee hyperthyroidism y mbo aka ha nwere ike ibu oke n'ihi obere ojiji. Ha na-etinye obere oge n'ịchọ mma, ihe na-agaghị ewe oge wee hụ uwe elu ha, nke ga-efunahụ ya.
Afọ ndụ nwamba bụ ihe dịka afọ 25. Mana n'agbanyeghị otu ọ ga-aga, ọ bụrụ na ị lebara ya anya, lebara anya na karịa ọtụtụ ịhụnanya, ga-abụ ezigbo enyi gị.
Otu esi elekọta otu pusi ochie
Afọ ole ka nwamba na-eto?
Ogologo oge ha ka nwamba na-eto? Dị ka anyị hụworo, pusi bụ nwa anụ na nwere uto nke ukwuu. N’otu afọ, ọkpụkpụ gị na akwara gị ga-etoru ogo mmadụ. Nke a pụtara na ị ga-adị njikere ọ bụla 'ịhụ ụwa' ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịpụ, bụrụ Cat Cat.
Omume ya anyị ga-achọpụta na ọ ga-agbanwe, nke nta nke nta. Ọchịchọ igwu egwu ga-anọgide na-adị elu, mana ka oge na-aga, ọ ga-ahọrọ nnọkọ cudd ahụ ọ bụghị nke na-atọ ụtọ. Ma lezienụ anya, nke a apụtaghị na anyị agaghị egwu egwu na ya, kama naanị na anyị agaghị ahụ ya ka ọ na-agbagharị n'ike ya dị ka mgbe ọ bụ nwa nkịta.
Ma, n'agbanyeghị eziokwu na a na-atụ aro ka inye ha nri (croquettes) maka nwamba ndị okenye site n'afọ nke ndụ, mmepe ya agaghi agwu. Ọ bụrụ n ’ọnwa ndị mbụ ka ọkpụkpụ ya malitere ito, malite n’afọ nke abụọ ka anyị ga - ahụ na ọ‘ yikwara otu anụ ahụ ’, na ọ gbasaa. Ọ bụ mgbe akwara ahụ mechara na-eto eto. Mmepe a nwere ike ịdịru karịa ma ọ bụ obere, dabere na njedebe nke anụmanụ na ụdị, mana ga-ejedebe site na afọ 3.
Site mgbe ahụ gawa, site na echiche m, anyị ga-enwe ezigbo nwamba okenye n'ụzọ ọ bụla.
Kedu mgbe ị malitere ịhụ na ịnụ nwamba?
N'ozuzu, were n’agbata ụbọchị itoolu na iri na isii. Ike ịmalite ịnụ ihe na ịhụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu oge. Ọ bụrụ na anyị elekwasị anya na anya, na mbụ ha ga-acha anụnụ anụnụ, mana ka ụbọchị na-aga, a ga-akọwa agba ikpeazụ ha, nke nwere ike ịbụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke na-acha aja aja ma ọ bụ karịa.
Ntị ya, nke jikọtara ya na ọmụmụ, meghee ma bido ịba uru nye nwa pusi ahụ. Ekele ha, obere nke echiche nke nguzozi ga-achị, dịka ọ dị na etiti ntị nke ntị ọ bụla.
Gini bu aru aru nwamba?
Ibu nke pusi ga-abawanye ka ọ na-eto. Ya mere, n'okpuru anyị ga-agwa gị ihe nkezi ibu bụ:
Nwa amụrụ ọhụrụ: 100 grams
Izu mbụ: Gram 115-170
Izu 2-3: Gram 170-225
Izu 4-5: Gram 225-450
Ọnwa 2: Gram 680-900
Ọnwa 3: Kilogram 1,4
Ọnwa 4: Kilogram 1,8
Ọnwa 6: Kilogram 3
Site na ọkara otu afọ nke ndụ ruo mgbe ọ ruru ọnwa iri na abụọ, a na-agbakwunye ihe dị ka gram 100 na 150 ihe dị ka kwa ọnwa. Ma enwere ọtụtụ nwamba ndị na-agaghị emecha uto ha ruo mgbe afọ abụọ gachara, nke ga-abụ mgbe ha ruru ogo ha kachasị nke bụ ihe dịka kilo 4 na nkezi.
Mara ọkwa dị iche iche nwa pusi nwere ike inyere gị aka ịghọta ọtụtụ ihe banyere ya. Ya mere, anyị nwere olile anya na ederede enyerela gị aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nwamba Noti » Nwamba » Curiosities » Uto nke nwamba
Ezigbo ozi, ihe niile m na-achọ, m nabatara ụmụ kittens 3 ma enweela m nnukwu, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 3 ma nwatakịrị ahụ erughị ọnwa isii.
Zaghachi Matías Amaru Valdivia Silva
Obi dị m ụtọ na ọ bara uru maka gị, Matías 🙂.
O juru m anya site na isiokwu ahụ na ha mechara mepee n'etiti afọ 2 na 3 nke ndụ. Afọ 3 gara aga m nakweere nwa pusi nke dị ọnwa 5. Ọ bụ ntutu dị mkpụmkpụ ruo otu afọ na ọkara nke ọ malitere ịba ụba nke ajị anụ na aji dị ka ọdụm nke dị n'olu ya. M na-ekpo ọkụ ihu igwe ihe ruru. 28 ruo 36 C ọ bụ ya mere na ọ kọwaghị m uto ajị ya.
Enwerem nwa puta di onwa ise na abali m dinara ya na subtransport nke mechiri emechi ma nchi echi m kuru ya puta ma ghapu ya ka o na egwughari na ime ulo, mu na ya no na ulo. ụbọchị ọzọ enwere m nleta site na ụfọdụ ndị enyi na n'abalị Dị ka ọkara nsutu mgbe niile tupu ụra na-ehi ụra mana kemgbe n'abalị mgbe m hapụrụ ya ọ bụ. Ezigbo ụjọ na surly na ọ dara m ụra nke ukwuu, ọkara susuru ya ọnụ wee malite ịmịgharị isi ya ma jiri ọnụ ya na-eme ihe ndị ọzọ, dị ka otu enyi m si kwuo, ọ gbakwụnyere na obere ọchịcha nwere ike ịbanye n'ime ntị ya mana ahụbeghị m Onweghi onye n'ime ha gwara m na dika nwamba a nwuru, ebe ha na akwa akwa, na enweghi m ego rue ngwucha onwa, obi erukwa m anya. Akụkụ m rie, rie nke ọma ma kpọọ mana anaghị m mara ihe mere kemgbe ụbọchị ndị agbataobi anyị bịara leta anyị, ma ọ bụ ihe nwa nwanyị nke otu onye agbataobi a mere n'ihi na kemgbe ahụ achọtara m ya obere, biko zaa m ngwa ngwa o kwere mee, daalụ maka ịga m
Ọfọn, ihe mbụ, ọ nweghị onye, ​​ma ọ bụ mmadụ ma ọ bụ pusi, nwere ike ịnwụ site na ịnwe ahụhụ n'ime ntị 🙂 Maka akụkụ a, echegbula.
Kedu ee, ọ nwere ike iwe iwe. Ọbụlagodi na ị hụghị ya, ọ bụrụ n’ezie na i nwere nke ahụ, ọ ga-ezobewo n’ime ntị gị.
Ozi ọma ahụ bụ na, site na ihe ị gụrụ, ọ dị ka obere obere ọ na-ebi ndụ dị mma. Ma ọ bụrụ na omume ya agbanweela kemgbe ụbọchị ahụ, ohere nwere ike ịbụ na mmadụ ma ọ bụ ihe kpatara ya nsogbu.
Ana m akwado gị ka gị na ndị enyi gị kpakọrịta, gị na ndị niile nọ n'ụlọ gị, ka ị chọpụta ihe gaara eme ya. Ọ dịghị njọ nwamba ịgbanwe omume ya site n'otu ụbọchị ruo ụbọchị ọzọ. O nwere ihe mere ya.
Daalụ maka ozi ahụ, ọ bara ezigbo uru, m ga-achọ ịkọ ahụmahụ m na ụmụ kittens ebe ọ bụ na achọrọ m ịnabata otu, ha nyere m obere, ọ bụghị izu abụọ gafere ma ọ gbapụ, nke abụọ na-eme ihe ike ma ha zuru m ya, isi ya bụ na ekpebiri m ịnabata nwamba abụọ na nnukwu ụmụ nwoke na ụmụnne nwanyị ndị gbahapụrụ n'ụlọ, enwere m obi a happyụrị na ha emeela omume nke ọma ma ha anaghị agbanahụ ha na-enwe ọ happyụ ebe a. na ndụmọdụ m abụghị na ha na-achọ ịnara ụmụ obere kittens kama na Ndị toro eto na-enwekwa obi ekele ma na-eme mgbanwe n'ụzọ zuru oke ma ọ bụrụ na ị na-enye ha ọtụtụ ịhụnanya na ịhụnanya, ọ bụrụ na ha anabata nnukwu, ha agaghị akwa ụta.
Zaghachi Paola Acuña
Daalụ maka ịgwa anyị akụkọ gị Paola.
Anyị hụrụ ngwụcha obi ụtọ 🙂
Ndewo, abịara m n'isiokwu a n'ihi na ọ dị m ka nwa pusi anaghị eto ọsọ ọsọ, ọ karịrị ọnwa abụọ ma ahụghị m ọganiihu. Amaghị m ma ọ bụrụ na m na-ada ada nri ya.
Ego ole ka ọ dara? Ka o sina dị, ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na-eri nri nke ọma ma na-ebi ndụ dị mma, echegbula onwe gị. E nwere nwamba na-anọ obere.
Ndewo, nwanne m nwanyị nwere kittens dị ọnwa ise na ha pere mpe, ha ga-ebu ihe karịrị gram 500 ma ọ bụ gram 600 ma anaghị m ahụ na ha na-eto nke ukwuu ma anyị na-echegbu onwe.
De ghasasia ha? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ana m akwado ịkpọrọ ha gaa na vet ka ọ nye gị ọgwụ na-ewepu ikpuru.
Ọ bụrụ na ha gbasiri ike, o nweghị ihe ga-echegbu ha. E nwere nwamba na-anọ obere.
Ndewo ọma ma nakweere nwa nwatakịrị dị otu ọnwa taa otu ọnwa gara aga na izu na-atụle gram 337 amaghị m ma ọ ga-adị arọ ma ọ bụ ọ bụ nkịtị, obere ụmụ ya nwụrụ na mberede nwa pusi a na-eri pokito a pokito taa x ihe atụ x ụtụtụ iri nri Otu nri ole na ole o wee hie ụra, ana m echegbu onwe m, ọ bụrụ na otu ihe ahụ na-eme ya, ọ bụ ya kacha buo ibu n'ime mmadụ atọ ahụ, mana n'ikpeazụ ọ naghị egwu ọtụtụ.
Nwa pusi kwesiri ekwesi aghaghi inwe ahihia ya na afo ya; na-enweghị ikwubiga okwu ókè, ma mgbe ị na-anọdụ n'azụ ị ga-ahụ azụ gị n'ubu ọzọ ma ọ bụ obere ogologo, na mgbe ahụ ị na akụkụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị kwuo na ị na-ahụ ka ọ na-ewute ya, ma na-echeba na ụmụnne ya agabigala, m ga-atụ aro ka akpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ ahụ ozugbo enwere ike. May nwere ike ịnwe nje dị na eriri afọ (ikpuru), ma wepu ha, ị ga-ewere syrop.
Ndewo, akụkọ gị na-atọ ụtọ, m nabatara nwa pusi, anaghị m ekwe ka ọ pụọ ma ana m atụ ụjọ na ọ ga-apụ.
Olee otú m ga-esi gbochie ya ịpụ?
Zaghachi Nayeli glz
Ga-anọnyere ya ọtụtụ oge: soro ya na-egwuri egwu, ịnọnyere ya. Na mgbakwunye, ọ dịkwa mkpa ịtụba ya na ọnwa isii iji gbochie ya inwe mmasị ịpụ na ịchọ onye ibe.
Nnọọ, m 5-ọnwa-ochie pusi wee pụọ ma o doro anya na hapụrụ na a cat 🙁 The abụrụ ọnụ lọghachiri nnọọ wallowed. Ajụjụ bụ, ọ nwere ike ịtụrụ ime naanị ọnwa ise? Ma ọ bụrụ otu a, enwere ike ịmebe ya, ka m ga-echere?
Ee eziokwu. Can nwere ike were ya iji rụọ ọrụ ugbu a na enweghị nsogbu.
Achọpụtara m nwa nwamba ụbọchị site n'okporo ámá wee bulie ya na karama ma nye ya obi ụtọ, ọ mara ezigbo mma na-acha anụnụ anụnụ na ọdụ na-acha odo odo. Ọ na-egwu egwu ma nwee mmasị ịpụ na patio, m bi n'otu ụlọ, ana m agba ya ụra ma ugbu a n'izu a, m ga-agba ọgwụ mgbochi ya ma tinye xip, mana Tọzdee a ọ hapụrụ gburugburu 11 na m ahubeghi ya ozo, achoro m ebe nile ka m juo ndi agbata obi.
Ajuju m nwere ike buru na nwamba nwamba di otua puo ma o bu hua ya oku .. echeghi m na o siiri ya ike ilaghachi
ma eleghị anya mmadụ were ya, mana ọ zuru ike
Afọ ole ka ọ dị? Na 5-6 ha na-achọkarị ịpụ, oge ụfọdụ ọbụna na mbụ (na ọnwa 4 na ọkara ma ọ bụ karịa).
Banyere ajụjụ gị, o yikarịrị ka ọ dị nso, zoo. Nwamba anaghị agakarị ogologo, obere ma ọ bụrụ na ha bụ ụmụaka. Legharịa anya n'okpuru ụgbọala na ebe ọ ga-abụrịrị na ị hụla ma ọ nwere ihu ọma.
Ndewo, enwere m nwamba afọ otu afọ, na mgbe ọnwa atọ gasịrị, ntutu isi bụ nnukwu nsogbu anyị bụ nke ukwuu na ị nwere ike iji ọnụ ọgụgụ mee ya, ị kpọtụrụ onye na-anụ ụlọ ahụ ma o doro anya na ọ bụ ihe nkịtị, ọ bụghị maka anyị, ọ ọ bụ na anyị agbanweela nri ya ugboro anọ n'afọ, agụụ anaghị eri ya, ugbu a ọ na-eri Mirringo, anyị amaghị ma ọ dabara ya nke ọma, ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ nrụgide, ndị ọzọ enweghị vitamin, na mbụ anyị zụtara ya nri kachasị elu , na m gụrụ na ọ na-eche na naanị ya nọ na mberede, anyị wetara ụmụ nkịta nwoke na nwanyị nwanyị ọnwa abụọ, ọ nwebeghị ike ịkọrọ ha, ọ tara ahụhụ na obere ụkwụ ya ma anyị nwere olile anya na ọ ga-agbake ngwa ngwa, I naanị chọrọ ịhụ ya obi ụtọ, mara mma, dị jụụ, anyị hụrụ ya n'anya nke ukwuu, olile anya idozi nsogbu ntutu isi daalụ !!!
Zaghachi Alex Devia
Ekwadoro m inye ya nri na-enweghị ọka. Lelee akara mpempe akwụkwọ, ma ọ bụrụ na ịchọta ọka, ọka, ọka bali, ma ọ bụ ọka ọ bụla ọzọ, tụfuo ya.
Enweghị m ike ịgwa gị ma ọ bụ nri ma ọ bụ na ọ bụghị ihe na-eme ka nwamba gị daa ntutu, n'ihi na enwere ọtụtụ ihe kpatara ntutu nwere ike ịda, (ebe a i nwere ihe omuma banyere ya), ma e wezụga, abughi m vetiran soja. Mana site na ahụmịhe m nwere ike ịgwa gị na anụmanụ na-eri anụ dị ka nwamba bụ mgbe ọ na-eri nri dị mma, na-enweghị ọka, ọ nwere uwe na-adị mma ma na-enwu gbaa.
Ndewo, m kuchiri ụmụ kittens 2, ụmụnne m nwoke ihe dị ka ọnwa anọ gara aga, nwoke na nwanyị, ihe dị iche na nha mgbe anyị kuchiri ha dị obere, ha dị ọnwa anọ, mana ugbu a ọ dị ọtụtụ, nwata nwoke ahụ buru oke ibu na nwata nwanyị ahụ pere mpe., Anyị nwere nchegbu, anyị amaghị ma nwa nwoke ọ na -eto nke ukwuu ma ọ bụ na nwa agbọghọ ahụ anaghị eto
Zaghachi ka o di mma
Nwamba nwoke na -ebukarị ibu karịa ụmụ nwanyị. Na ụkpụrụ, ọ nweghị ihe ga -echegbu onwe ya ma ọ bụrụ na ahụ adịghị ha mma.
Ihe niile maka pusi gị
Na-elekọta gị cat dị ka o kwesịrị na ndị a nwere ikwu na anyị na-eme ka na ọ ga-n'anya. Na mgbakwunye, ịnwere ike iji ụfọdụ onyinye a na-enweta ugbu a mee ihe:
Onye bụ Don Gato, anụ ụlọ kwesịrị ntụkwasị obi nke Auronplay
Kedu afọ ole ụmụ kittens na-eri nanị ha
Nweta ihe ọhụrụ banyere nwamba.
Ego na nri nwamba na ngwa